How'd it happen and more reports?: သင်ကော ဘယ်အလွှာထဲမှာဘာလဲ?
ထိုင်ဝမ်မှာ သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ ရှင်းရင်ဆရာတော်က လူ့အလွှာသုံးပါးအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဟောတော်မူပါတယ်
လူမှာ အမျိုးအစားလူတန်းစား ၃ မျိုး ၃လွှာ ခွဲခြားထားပါတယ်။ ။
အထက်တန်းလွှာ၊ အလယ်တန်းလွှာ နဲ့ အောက်တန်းလွှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုဒီလိုခွဲခြားထားပါတယ်။
အထက်တန်းလွှာဟာ ဥာဏ်ပညာအကြောင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။
အလယ်တန်းလွှာဟာ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။
အောက်တန်းလွှာဟာ အတင်းအဖျင်း တွေဆွေးနွေးကြတယ်။
အောက်တန်းလွှာဟာ အမြဲလိုလို အလကားပဲ ရချင်ကြပါတယ်။
အထက်တန်းလွှာဟာ သူများကို အမြဲချီးမွန်းကြတယ်။
အလယ်တန်းလွှာဟာ သူများကိုသိပ် မခေါ်မပြောဘူး။
အောက်တန်းလွှာဟာ အထက်ဖားသလောက် အောက်အရမ်းဖိနိပ်တယ်။
အထက်တန်းလွှာဟာ ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာတယ်။
အလယ်တန်းလွှာဟာ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်တယ်
အောက်တန်းလွှာဟာ စိုးရိမ်စိတ် သံသယစိတ်တွေပြည့်နက်နေတတ်တယ်။
အောက်တန်းလွှာဟာ စိတ်ခံစားချက် နောက်လိုက်နေတတ်တယ်။